Produkttests – ညုခရီးသွားအပေါ် Flatboat goby
Stoff & ချုပ်ရိုး
Video & ဓာတ်ပုံကို
ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ: မှူးဖုန်စျေးပေါများအတွက် 4K နှင့် Gimbal နှင့်အတူ Xiaomi က Mi မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အသစ်ကမော်ဒယ် Videos mit Erfahrung besser machen.
by သူတို့က Daniela play
ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပထမဆုံး Go ကို Pro ကိုကင်မရာတဦးတည်းဝယ်ယူခဲ့ (ငါနေဆဲပိုင်ဆိုင်) und war relativ enttäuscht von der Qualität insbesondere bei schlechtem Licht. Später kam dann eine Go Pro3အပြင်, ဒါပေမဲ့ဒီလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲသွားတယ် (ခိုးခြင်း). အများအပြားထည့်သွင်းစဉ်းစားနွေရာသီ လာ. ပြီးနောက်2တရုတ် ADDED ထံမှကင်မရာများ (စြေး 25.- အားလုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်အတူယူရို! ငါတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်. အဆိုပါချက်ပြုတ်ဗီဒီယိုသည်ဤကင်မရာကိုအတူအလွန်နိမ့်အလင်းမှာတမင်တကာပစ်ခတ်ခဲ့သည်. ငါပြီးသား YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဧရိယာထဲမှာအနည်းငယ်သောဗီဒီယိုများအပ်လုဒ်လုပ်ထားကြပါပြီပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများအဘို့. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အတွက်တစ်ခုခုမှသွား. Aber heute geht es um die Xiaomi Mijia Mi Sphere 360° Kamera.
သောခရစ္စမတ်သစ်ပင်အောက်၌သင့် 2017 ချို့တဲ့မဟုတ်. GOPRO ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာ° MI 360? Was legt Ihr Euren liebsten unter den Weihnachtsbaum?
သာ2နှစ်ပေါင်းစောင့်ဆိုင်း. လာမယ့်ရွက်သည်အထိ. ထိုသို့ဆက်ဆက်လိမ့်မည်, အချို့အတွက်, အကောင်းတစ်ဦးနှာခေါင်းရှိသည်သော, ခရစ္စမတ်သစ်ပင်အောက်၌အထူးကင်မရာဖြစ်လိမ့်မည်. Nein… Read More
သတင်းကို flash: Wellsee နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးထုတ်ကုန်များဝယ်ယူမှုနှင့်အတူသတိထားပါ Unseriöse Fakes
Für unsere Batteriewahl auf der Grundel haben wir uns lange Zeit gelassen und wir testen ja gerne. Wellsee ist ein chinesischer Distributor der für seine Laderegler Fakes bekannt ist. ဤအတောအတွင်း… Read More
အစိုင်အခဲလှေအရေပြားပေါ်မှာစမ်းသပ်ပြီး Snaply rotary ခုတ် Taugt ein billiger Rollschneider für unser Hobby?
E ကိုerstes Nähzubehörအတွက်, ကျနော်တို့ကို rotary ရှုးပွုပါပွီခဲ့သည်. ရှည်လျားသောပြားဖြတ်တောက်ဘို့ငါတို့ထိပ်တန်းပစ္စည်းနှင့်အတူပြဿနာဖြစ်ပါသည်, ပစ္စည်းဥစ္စာ၏ရေယဉ်ပြည်တွင်းရေးအပေါ်ယံပိုင်းကတဆင့်ကျနော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်း နည်းလမ်း den Schußfaden zu ziehen nicht anwenden können.
Jetzt Übersetzung korrigieren. ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
Dieses Werk von Daniela Tocan und Wilfried Gödert ist lizenziert unter einer ကို Creative Commons Attribution - ရောနှောအခြေအနေများ Share 4.0 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Lizenz. သငျသညျအောကျနယ်ပယ်ကျော်လွန်ဒီလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖတ်နိုင် http://tocan.de erhalten.
သူတို့က Daniela play on ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်က: Epever-eBox-WIFI-01 Wi-Fi ဆာဗာ / RS485 zu Wi-Fi Adapter ကို
Dieko on ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်က: Epever-eBox-WIFI-01 Wi-Fi ဆာဗာ / RS485 zu Wi-Fi Adapter ကို
Judith Laura on လှေများအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်လောကလုံးနေရောင်ခြည်နှင့်ဘက်ထရီမော်နီတာမသာ (ဗီဒီယို & တိုက်ရိုက် Demo)
သူတို့က Daniela play on Tracer 1210 တစ်ဦးက, အကူအညီ!!!
သူတို့က Daniela play on float switch ကို